Pangu anovimbisa kuvhura jailbreak yeIOS 9.3.3 munguva pfupi iri kutevera | IPhone nhau
Pangu anovimbisa kuvhura jailbreak yeIOS 9.3.3 munguva pfupi, "pa-inoda-jailbreak"
Vazhinji venyu makarasa kutenda, kunyanya mushure mekunge Apple yaburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 9.3.3, asi chirevo chinoti tariro ndiyo yekupedzisira yaunorasikirwa nayo. Pangu anga aratidza jailbreak yeIOS 9.3.2 mune yekupedzisira Nhare Yekuchengetedza Musangano, pamwe kuti Apple itende kuti kupunzika kwayo kwejere hakuchashanda mune yazvino vhezheni yeIOS, asi maminetsi mashoma apfuura vakaburitsa tweet inovimbisa izvozvo ichaburitsa jailbreak yeIOS 9.3.3 munguva pfupi
Iyo jailbreak ichave inowirirana ne64-bit zvishandiso uye iwe uchave unokwanisa kusunungura iOS zvishandiso kubva mushanduro 9.2 kune yambotaurwa iOS 9.3.3, yazvino vhezheni vhezheni. Zvine musoro, parizvino ruzivo rwechishandiso chitsva harizivikanwe, asi Pangu akatotaura kuti tinoshanyira webhu en.pangu.io kutarisa kana kuvhurwa kwacho kwaitika. Kune rimwe divi, ivo vangangoita tweet nekukurumidza panongowanikwa nyowani nyowani yejeri.
Iyo jailbreak yeIOS 9.3.3 yave pedyo
Tiri kuzoburitsa Pangu jailbreak chishandiso cheIOS 9.2 - 9.3.3 munguva pfupi iri kutevera. Ndokumbira utarise webhusaiti yayo pa pangu.io uye iva nemoyo murefu. Ndatenda zvese
- PanguTeam (@PanguTeam) July 24, 2016
Tiri kuzoburitsa Pangu Jailbreak chishandiso cheIOS 9.2-9.3.3 munguva pfupi iri kutevera. Ndokumbira utarise webhusaiti yavo pa pangu.io uye iva nemoyo murefu. Ndinokutendai mose.
Ramba uchifunga kuti Pangu haasi Luca Todesco, anoseka uyo akanaka kwazvo, asi uyo ave nemukurumbira zvakanyanya pakuratidza kuti anokwanisa kupaza matirongo ake pane kuvhura maturusi eruzhinji. Kana Pangu akataura kuti iyo jailbreak iri kuuya munguva pfupi, iyo jailbreak yeIOS 9.3.3 iri kuuya munguva pfupi.
Izvo zvakati, zvirokwazvo vazhinji venyu muchashamisika kana zvakakodzera kuvandudza kana kwete. Ini pachangu, handichadi kukurudzira chero chinhu, sezvo Pangu iye pachake akataura kuti avandudze kuIOS 9.2 nekuti yaisanganisira akakosha ekuchengetedza zvigamba uye vashandisi vazhinji vakasara vasina iyo iOS 9.1 jailbreak. Zvakare, iOS 9.3.3 yakaburitswa svondo rino uye hapazove neiyo nyowani vhezheni munguva pfupi, saka yakanakisa ndeye mirira kutangwa kweiyi jailbreak kuti ive yakaitika uye kugadzirisa ipapo.
Chinhu chimwe chinonakidza kwazvo chatinogona kuverenga pane yavo webhusaiti izvozvi ndizvo zvavakadaidza kuti "jailbreak pakuda." Sezvakatsanangurwa, inotevera jailbreak ichashanda nekukanda pachirongwa chePangu uye icharega kushanda patinotangidza iyo iOS chishandiso. Asi izvi hazvireve kuti kuputswa kwetirongo kwakadzvanywa, asi izvo tinogona kusarudza patinoshandisa iyo jailbreak uye kana zvisiri. Sezvakaverengwa pawebhusaiti yayo, "kuenda kujeri kana kwete hausisiri iwo mubvunzo."
Sekutaura kwaPangu, moyo murefu. Inogona kunge iri nyaya yemaawa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Pangu anovimbisa kuvhura jailbreak yeIOS 9.3.3 munguva pfupi, "pa-inoda-jailbreak"
Nhau huru, ini ndinotarisira kuzokwanisa kuisa chaiyo imba munguva pfupi, nekuda kweizvozvo uye nezvimwe zvinhu zvakawanda zvakakodzera jeri.
Izvo zvakanaka kwazvo !!! Isu tave nemoyo murefu kubva pakati paChikunguru, kuti ivo pachavo vakati vaizoibvisa ... uye zvanga zvisina kudaro. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nekutenda, kunyange ini ndisingavimbi zvakanyanya. Ini pachangu, ini ndakaguta zvishoma neake "kuva nemoyo murefu".
kuora mwoyo akadaro
Ndeipi nhau dzakaipa kwandiri, ndine iyo iPad 2 uye handigone kuita chero chinhu nejeri ...
Hei !!!! ipapo iyo Iphone 5 yakasara kunze…. Izvo hazvigone kuve !!!!!!
Ha ha ha ndinoseka zvivimbiso zvinokwira muutsi vanga vachitaura kuti kubvira pavakaburitsa iyo ios 9.1.2 uye hachina kana chinhu, izvi kubva pane zvandinoona iri bhizinesi uye kana vasina kuwana chidimbu kuti vabudise
Mhoro Pablo, ndine shamwari inovimbisa kuti kurodha pasi kwakatotanga, sekuzvinzwisisa kwandinoita, vari kuiburitsa zvishoma nezvishoma kuti irege kukanganisa maseva, handizive kana ichizove chokwadi kana kwete, akandituma mamwe mawebhusaiti uko kwavanopa iko kurodha pasi link uye painoitamisa zvakare Nditumire kune yepamutemo pangu webhusaiti inoratidza chimwe chinhu senge "iva nemoyo murefu, ichave iri munharaunda yako munguva pfupi." Kana chimwe chinhu chakadai.
Yakabuda sei kare? Munyika ipi?
Chii chakabuda kare?
Pane iyo yepamutemo webhusaiti inoti «Kuuya munguva pfupi»
Taura chimwe chinhu. Kana iwe uine icho kune rimwe divi, chiise pasi kudropbox uye upe chinongedzo, kana mega, kana chimwe chinhu chakadai ...
Jailbreak yakagara yakatangwa neSvondo (kana ndichirangarira nemazvo) ...
Pindura kuna erplansha
Yabuda muchiChinese. Pa reddit ivo vanotaura nezvazvo kwete kuve untethered
Pindura kuna adika
Miko, ndokumbirawo umise mishonga
Pindura kuna Falcon
Guild yeDungeoneering, iyo nyowani RPG inogara pane iyo App Store